Fiarovana ny sokatra – 150 000 dolara entina hanampiana ny TSA
Posted on: December 4, 2020 Written by: Book News Categorized in: Economie, Malagasy
Ny Usaid sy ny Tetikasa Iraisam-pirenena Fanampiana ara-Teknika an’ny Governemanta Amerikana (DOI-ITAP) dia nanome fanampiana ara-bola ny TSA amin’ny fikarakarana ireo sokatra voavonjy mandra-pahatonga ny fotoana hamerenana azy ireo any amin’ny tontolo fonenany.
Ireo andraikitry ny TSA
Ny Sampandraharaha Amerikana misahana ny Fampandrosoana Iraisam-pirenena (Usaid) sy ny Tetikasa Iraisam-pirenena Fanampiana ara-Teknika an’ny Governemanta Amerikana (DOI-ITAP) dia nanolotra lelavola mitentina 150.000 dolara ny “Turtle Survival Alliance” (TSA). Izany dia natao ho fanampiana ny TSA amin’ny fikarakarana ireo sokatra voavonjy mandra-pahatonga ny fotoana hamerenana azy ireo any amin’ny tontolo fonenany.
“Manatanteraka asa fiarovana ny sokatra tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ny Alliance Turvival Survival. Ary manohana ny Turtle Survival Alliance amin’ny famantsiam-bola amin’ny fanangonana ireo sokatra azo tamin’ny mpanondrana antsokosoko, ny fitondrana azy ireo any amin’ny ivon-toerana fikarakarana azy, ary ny fametrahana azy ireo amin’ny toerana voafantina sy azo antoka »,
hoy ny Tale Jeneralin’ny Usaid, John Dunlop.
Mpitarika maneran-tany amin’ny fiarovana ny sokatra ny TSA, ka nanome antoka izy ireo ny tsy hisian’ny fandringanana sokatra amin’ny taonjato faha-21. Sokatra maherin’ny 24.000 amin’izao no karakarain’izy ireo eny amin’ny trano fanrenana eto Madagasikara, sokatra tsy fahita afa-tsy eto Madagasikara ireo ary manintona ny mpizahatany.
Karakaraina ireo sokatra voavonjy mandra-pahatonga ny fotoana hamerenana azy ireo any amin’ny tontolo fonenany. cc: Sary nomena
Nanazava ny Mpandrindra Nasionalin’ny TSA Madagascar, Dr. Herilala Randriamahazo:
“Adidy masina ho anay ny mikarakara ireo biby ireo ary efa vola be no lany tamin’ny famonjena sy fanarenana azy ka tsy azonay atao ny mamoaka azy raha tsy misy ny drafitra efa maty paika.”
Ity fiaraha-miasa vaovao ataon’ny governemanta Amerikana ity dia manampy ny TSA amin’ny fanohizana ny asa fiarovana ny harena voajanahary eto Madagasikara.
Any amin’ny toerana hiasan’ny TSA izay any Atsimon’ny Nosy dia fady ny fihazana sokatra, izany no miaro sy mampilefy ny fanondranana tsy ara-dalàna. Mifototra amin’ny ireo vondron’olona ifotony ny fomba fitantanan’i TSA sy fanofanana ny fikarakarana ireo sokatra any amin’ireo ivon-toerana fanarenana. Izany dia manamafy ny andraikitr’ireo vondron’olona ifotony amin’ny fiarovana ireo sokatra amin’ireo mpivarotra antsokosoko sy mpihaza.
Momba ny asa ataon’ny Usaid
36 taona izao ny governemanta amerikana izay isoloan’ny Usaid tena, no miara-miasa amin’ny fanjakana malagasy. Toy ny tamin’ny taon-dasa dia fanampiana mitentina 114 tapitrisa dolara no nentin’ny Usaid ka 62 tapitrisa dolara amin’izany dia eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, ary 40 tapitrisa dolara ho an’ny fanjarian-tsakafo ho an’ireo ianjadian’ny haintany any atsimo hatramin’ny 2015. Izy ireo ihany koa dia miady amin’ny fanondranana biby antsokosoko, ka amin’ny alalan’ny Usaid Hay Tao no manamafy ny politika iadiana amin’ny heloka bevava atao amin’ny biby, miaro ny fahamarinana ara-tontolo iainana, ary miady amin’ny kolikoly sy ny fanondranana biby an-tsokosoko. Ny Usaid Mikajy kosa dia ny tetikasa fiarovana ny tontolo iainana, manome andraikitra ny vondron’olona ifotony, ny fikambanan’ny fiarahamonim-pirenena isam-paritra ary ny mpiasan’ny ala hiatrehana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana biby an-tsokosoko any amin’ny faritra Menabe sy MaBaie (Masoala-Makira-Baie d’Antongil).
Tagged as: Masoivohoamerikanina sokatra tontoloiainana tontoloiainanamadagasikara tsa turtlesurvivalalliance
Previous post Changement climatique – Rio Tinto QMM lance l’Initiative « Mine Verte »
Next post Ambondrona dares, they launch their new flagrance
0 comments on “Fiarovana ny sokatra – 150 000 dolara entina hanampiana ny TSA” Add yours →